Published October 13, 2020 at 10:37 PM CDT
Lix iyo toban degmo ee Iowa waxay lahaayeen 14-maalmood saamayn togan oo ah, ama ka sareysa 15%. Tani waa hal shuruud oo looga baahan yahay degmo-dugsiyeedyada inay ku dalbadaan barashada internetka oo keliya. Degmada Sioux ayaa ah tan koowaad oo leh in kabadan 24%. Waxaa jira wadarta lix gobal waqooyi-galbeed Iowa oo ka sarreeya heerka 15%, oo ay ku jiraan Woodbury oo leh qiime dhan 15.3%.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu raadraacayaa in kabadan 30 kiis oo cusub oo ah coronavirus-ka cusub iyadoo 6,420 ay dhan yihiin iyo 81 dhimasho ah.
Degmada Dakota ayaa ka warbixisay afar kiis oo cusub oo loogu talagalay 2,425 dhammaantood iyo 44 dhimasho ah.
Waxaa jira 522 xaaladood oo togan oo ku yaal Gobolka Union iyo 10 dhimasho ah.
Tirada ardayda iyo xubnaha shaqaalaha ee ay saameysay COVID-19 ayaa si weyn hoos ugu dhacday Kulliyadda Morningside. Waxaa jira wadar ahaan shan arday oo cusub iyo xubno shaqaale ah oo imtixaan laga qaaday inta udhaxeysa 5-tii Oktoobar ilaa 11-keedii. Taasi waa in ka yar kalabar kiisaska cusub usbuucii ka horreeyey. Labaatan iyo labaatan waxay ku jiraan go'doon / karantiil gudaha iyo banaanka xerada. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaa jiray ku dhowaad 90. Kulliyadda Morningside College ayaa soo saarta qiimeyn toddobaadle ah Talaad kasta.
Local NewsLocalIowaNebraskaSouth DakotanewsCOVID-19Somali
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa qirey in Iowa ay arkayso tiro aad u tiro badan oo kiisask
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa qirey in Iowa ay arkayso tiro aad u tiro badan oo kiisaska coronavirus ah iyo diiwaan galinta isbitaalada,…
Iowa, waxaa ku jira 449 bukaan ah oo qaba Siouxland Health Health warbixinta 72 ka daaweyneysa
Iowa, waxaa ku jira 449 bukaan ah oo qaba Siouxland Health Health warbixinta 72 ka daaweyneysa labada isbitaal ee Magaalada Sioux. Waxaa jiray 31…
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu soo sheegayaa laba dhimasho kale oo dheeraad ah Gobolka Woodbury
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu soo sheegayaa laba dhimasho kale oo dheeraad ah Gobolka Woodbury wadar ahaan 78.Waxaa jiray 14 dhimasho oo dheeri ah…
Saddex qof oo kale ayaa ugu dhintey Degmada Woodbury sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19
Saddex qof oo kale ayaa ugu dhintey Degmada Woodbury sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegaysa in dhimashada…